बलात्कार प्रयास मुद्दामा महराले पाए सफाइ के हो मुद्दा ? – tshorolpa
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनीमा नरेन्द्र मोदी, आजै भारत फर्किने
काठमाण्डौ महानगरपालिकामा बालेन शाह झन्डै २९ सय मतले अगाडि
भरतपुरमा एमालेको अग्रता कायमै,
मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा एमाले विजयी
सागकी स्वर्ण विजेता सञ्जु चौधरी मंगलबार बिहान मृत भेटिइन्
प्रचण्डले देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नु तर्साउने कुरा,के जनताले स्वतन्त्र मतदान गर्न नपाउने? : जगन्नाथ पौडेल
आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै, के-के गर्न पाइदैन?उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख जरिबाना
शैलुङ गाउँपालिका पाँच वर्षभित्र मुलुककै नमुना बनाउँछु : नबराज खडका
निश्चल अधिकारीको “चिनजान गरौ न साथी” गीतको भिडियो सार्वजनिक
भक्तपुरमा चार मध्ये तीन पालिकामा हाम्रो जित सुनिस्चित : गोविन्द प्रसाद दुलाल केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले
Home/समाचार/बलात्कार प्रयास मुद्दामा महराले पाए सफाइ के हो मुद्दा ?
बलात्कार प्रयास मुद्दामा महराले पाए सफाइ के हो मुद्दा ?
News ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १३:१४
0 242 Less thanaminute
५ फागुन, काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार उद्योगको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्‍ला अदालतले महरालाई कसूरदार होइन भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर सोमबार सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ
के हो मुद्दा ?
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख महरामाथि १२ असोजको साँझ संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो ।
यो घटना १३ असोजमा बाहिर आयो । त्यसबेला महरा र उनको सचिवालयले आरोप अस्वीकार गरेको थियो । त्यसवेला महराले कर्मचारी समायोजनमा परेपछि आफूमाथि रिस पोखिएको दाबी गरेका थिए । तर महरा र पीडित महिलाको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), सीसी टीभी फुटेज लगायतको विश्लेषणबाट प्रहरीले महरा त्यो दिन सुविधानगरस्थित महिलाको घरमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
१४ गते बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो ।
लगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपि सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएनन् । उनको राजीनामा आएको केहीबेरमा पीडित महिलाको नयाँ भिडियो सार्वजनिक भयो, जसमा उनले बोली फेर्दै महरा आफ्नो कोठामा आउँदै नआएको दाबी गरिन् ।
पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा पनि बलात्कार प्रयास नभएको बयान दिएकी थिइन् । तर उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महरा कसूरदार होइनन् भनी मान्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेकै अवस्थामा महरा उच्च अदालत पाटनमा पुगे । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर गर्‍यो, तर मुद्दाको अन्तिम फैसला छिटो गर्न आदेश दियो ।
त्यसअनुसार सुरू भएको बहस आइतबार नै सकिएको थियो ।
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:५१
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०८:२५
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट चीनमा पनि भेटियो
२८ मंसिर २०७८, मंगलवार १३:४०
अख्तियारले सचेत गराउँदै स्थानीय तहलाई दियो ६१ बुँदे सुझाव
१५ मंसिर २०७६, आईतवार १४:१६